अन्तिम सँस्कारका लागि चितामा राखिएकाे श’वले टाउकाे हल्लाएपछि मलामीकाे भयो भागाभाग! – PathivaraOnline
Home > रोचक > अन्तिम सँस्कारका लागि चितामा राखिएकाे श’वले टाउकाे हल्लाएपछि मलामीकाे भयो भागाभाग!
अन्तिम सँस्कारका लागि चितामा राखिएकाे श’वले टाउकाे हल्लाएपछि मलामीकाे भयो भागाभाग!
admin January 29, 2020 रोचक	0
अन्तिम संस्कारका लागि श’वलाई चितामा राखिएको थियो । चितामा आ’गोसमेत लगाइएको थियो । तर एक्कासी चितामाथि राखिएका ती व्यक्तिले टाउको हल्लाएपछि कोकोहोलो मच्चियो । मृ त ठानिएका व्यक्ति चल्मलाउन थालेपछि केही मलामी भागेको भारतीय मिडिया आजतकले बताएको छ । भारतको ओडिशाकाे गाउँका स्थानीय सिमाञ्चल मलिकलाई अन्तिम संस्कार गर्दै गर्दा टाउको हल्लाएको देखेपछि उनलाई सामुदायिका स्वास्थ्य केन्द्र पुर्‍याइएको थियो ।
‘केही सेकेन्डको अन्तरालमा उनी हल्लिन थाले, उनले मुखबाट सास पनि फेर्न थाले । हामीले हतारहतार चिताको आगो निभायौं र थाहा पायौं कि सिमाञ्चल मृ त होइन बेहोस् मात्र भएका रहेछन्,’ आफन्त मुरलीधर मल्लिकले भने । डाक्टरका अनुसार अस्पताल भर्ना हुँदा सिमाञ्चलको नाडीको गती निकै कम थियो । स्था
नीयले उनको स्वास्थ्य परीक्षण नगरीकनै अन्तिम संस्कारका लागि लगिएको डाक्टरले बताए । ‘यो ठिक भएन । डाक्टरले मृ त घोषणा गरिसकेपछि अथवा श वको पोस्टमार्टमपछि मात्रै अन्तिम संस्कार गरिनुपर्छ,’ डाक्टरले भने । पुलिसका अनुसार मलिक शनिबार बाख्रा र भेडा चराउन जंगल गएका थिए तर बेलुकासम्म वस्तु फर्किसकेपछि पनि उनी फिर्ता नभएपछि परिवारले खोज्न जाँदा उनलाई नजिकैको जंगलमा अचेत लडिरहेको भेटेका थिए ।
पछिल्लो समय नेपाली बजारमा मात्रै नभएर भारत बंगलादेशमा पनि प्याजको मूल्य दिनदिनै आकाशिदै गएको छ । प्याजको मूल्य आकाशिएसँगे चोरले पसलबाट पैसा होइन प्याज चोर्न थालेका छन्। भारतको पश्चिम बंगालस्थित पूर्वमिदनापुरमा एक सब्जी पसल फोडेर चोरले प्याज चाेरेकाे छ । अचम्मको कुरा के छ भने चोरहरूले पसलमा राखिएको पैसा भने छुँदा पनि छोएनन्, केवल प्याज, लसुन र अदुवा मात्रै लिएर भागे।
यस्ता संकेतहरू देख्नुभयो भने सम्झनुहोस्, नसोचेको धन आर्जन हुनेवाला छ ! के के हुन् ती संकेतहरू? जान्नुहाेस्
१९ बर्षिया युवाती मन्दिर नखुले अनिष्ट हुन्छ भन्दै यसरी ढ’लिन्, तुरून्तै दुर्गा मन्दिरमा भयो यस्तो अचम्म! (भिडियो हेर्नुस्)
दिदी बहिनीलाई नै गर्भवती बनाउने पुरुष एउटै र समय पनि एउटै भएपछि भयो यस्तो खैलाबैला